बहुमत - सिसाकलम ब्लग
यसरी माओबादीले बहुमत ल्याएको ल्यायै देखेर अरु दलहरुलाई छटपटी भयो । र रातारात मिटिंग बसेर हामी पनि बहुमत नल्याई भएन भनेर निस्कर्स निकाले । कांग्रेसमा सुरुवात रामचन्द्र बाजेले गर्नु भयो । राजधानी बाहिरको एक कार्यक्रममा उहाँले बहुमत चखाउनु भयो । पछी फेरी सुसिल'दाले बहुमतको अर्को डोज दिनु भयो । कांग्रेसले आफु भरिलो, रसिलो भएको महसुस गर्यो । कांग्रेसीजनहरु हर्षले गद्गद भयो ।
यसरी एमाओबादी र कांग्रेसले बहुमत ल्याईसकेसी बल्खु दरवारले नि बहुमतको आवस्यकता महसुस गर्यो । यहाँ एउटा बहुमत ल्याएर सजाउन पाएदेखी क्या गजप देखिने थियो भनेर नेतागणहरु बहुमत खोज्न निस्किए । एक्कासी कामरेड झलनाथले फेला पर्नु भयो र एमालेको लागी बहुमत दिलाउनु भयो । अव एमालेले पनि बहुमत ल्यायो । मादप कामरेडलाई बहुमतले पुगेनछ । फेरी उहाले लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरु बीच अंशबण्डा हुने गरी दुइ तिहाइ बहुमत ल्यायो । यता साना दलहरु पनि किस्ताबन्दीमै किन नहोस पार्टीलाइ बहुमत दिलाउने कसरत गर्न थाले ।
एक समय थियो । बहुमत ल्याउन चुनाव हुनु पर्थ्यो चुनावमा ५० % भन्दा बढी सिट जित्नु पर्थ्यो । अहिले चुनाव हुनु आवस्यक छैन । न त सिट जित्नु नै । अचेल भासणले नै बहुमत आउन थालेको छ । र छाप लागेको मतपत्रले होइन । नेताको जिप्रैले बहुमत ल्याउन थालेको छ । लाग्छ, अहिले बहुमत पनि खासा बजारमा छ्यासछ्यास्ती पाइन थालेको छ र इच्छा लाग्ने दलहरुले त्यसलाई सजिलै खरिद गर्न सक्छन ।
by Nepali Caricature at 09:29
रवि मिश्र said...
पाठकबृन्द सरि है ! त्यहाँ लास्ट तिर पचास र सिटको बिचमा % (प्रतिसत) चिन्ह हुनुपर्ने छुटेछ ! यसो मिलाएर पढिदिनु होला | म जाँगर चलेसी इडिट गर्ने छु |
भाषाको कुरामा चाहिँ म अल्लि बढी नै 'सेन्सेटिव' हुन थालेँ कि कसो हो? यस्तो राम्रो लेख्ने मान्छेले हिज्जेमा ध्यान पुर्‍याए सुनमा सुगन्ध हुने थियो। यति भनेपछि यो सुन हो भनेर भन्नुपर्छ र? :P